भाग्यमानी विन्दु : हराएको ११ तोला सुन पाउँदाको खुशी ! हेर्नुहोस
भाग्यमानी विन्दु : हराएको ११ तोला सुन पाउँदाको खुशी !
बुटवल । ११ तोला सुन भएको झोला हराउँदा कस्तो हुन्छ होला ? अनुमान गर्नुहोस् त । त्यस्तै भयो सैनामैना नगरपालिका–४ की विन्दु पोखरेललाई ।कपिलबस्तुबाट बुटवल आउने क्रममा सैनामैना नगरपालिका–४ की विन्दु पोखरेलको झोला बुटवलको भुड्कीचोकबाट हराएको थियो । उक्त झोलामा ११ तोला सुन थियो ।
झोला हराएपछि उनले प्रहरीलाई जानकारी दिइन् । प्रहरीले झोला खोज्दै जाँदा बसपार्कमा भेट्टायो । उक्त झोला कसैले लगेको रहेनछ। फेला परेको सुनका गहना सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी प्रतित सिंह राठौरले बताए । हराएको सुनका गहना पाउँदा पोखरेल मख्ख परिन् र प्रहरीलाई धन्यवाद पनि दिइन् ।
निवेदनका आधारमा प्रहरीले खोजतलास सुरु गरेको थियो । फेला परेको सुनका गहना सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी प्रतित सिंह राठौरले बताए । हराएको सुनका गहना पाउँदा पोखरेलको मुहारमा खुशी छाएको थियो । पोखरेलले हराएको गहना फेला पार्ने प्रहरीलाई धन्यवाद दिँदै खुशी व्यक्त गरेकी थिइन् ।